Bit By Bit - Ukuqwalasela ukuziphatha - 2.3.2.7 Inobuzaza
Ezinye iinkcukacha ukuba iinkampani kunye oorhulumente kufuneka uvakalelo.
iinkampani inshorensi zempilo nkcukacha malunga zonyango efunyenwe ngabathengi bazo. Le nkcazelo kusetyenziswa kuphando olubalulekileyo ngempilo, kodwa ukuba aba yoluntu oko ezinokuba kunokukhokelela ngokweemvakalelo nokwenzakala (umzekelo, iintloni) kunye umonakalo kwezoqoqosho (umzekelo, ilahleko sengqesho). Kude ahlukile, abaninzi imithombo yedatha enkulu ulwazi nokutshuntsha. Yokuzaza yale ngcaciso yinxalenye yokuba imithombo yedatha enkulu zidla ingafikeleleki (echazwe apha ngentla).
Enye indlela, ukuba abaphandi kuzama ukujongana nale meko kukuba de-ukuchonga kwezintlu sinenkcazelo ontununtunu. Ke, njengoko ndiza kubonisa ngokwenkcukacha kwiSahluko 6 (Unxulumano) le ndlela nzulu umda ngeendlela ukuba kakhulu laxatyiswa ntle kunye izazinzulu data.
Elokuphetha, imithombo yedatha enkulu namhlanje (nangomso) jikelele iimpawu ezilishumi. Uninzi iipropati-enkulu entle, usoloko-kwi, kwaye nonreactive-kuvela kwinyaniso kwi iinkampani ubudala lwedijithali kunye noorhulumente bayakwazi ukuqokelela idata ngenzinga ukuba akwenzeki ngaphambili. Ke, abaninzi ezimbi iimpawu-engaphelelanga, engavumelekanga, non-ummeli, baphambuke, algorithmically yadubadubeka, engavumelekanga, emdaka, novelwano-kuvela kwinyaniso yokuba kwedata eqokelelwe abaphandi kubaphandi. Ukuqonda ezi mpawu ke linyathelo ayimfuneko yokuqala ukufunda data ezinkulu. Kwaye, ngoku sibheka kuzo uphando izicwangciso sinokusebenzisa le data.